Vaovao - Fanontana sy famonosana: firy no fantatrao momba ny fanasokajiana kitapo fonosana
Mora entina ny kitapo fonosana ary azo ampiasaina hihazonana entana. Fitaovana famokarana isan-karazany, toy ny taratasy kraft, baoritra fotsy, lamba tsy tenona, sns. Fantatrao ve ny fanasokajiana manokana ny kitapo?
1. Kitapo fonosana fampiroboroboana
Kitapo fonosana fampiroboroboana dia natao tamin'ny alàlan'ny fonosana fonosana mba hampiroboroboana sy hampivelarana ny vokariny. Ity karazana fonosana ity dia misy loko manankarena kokoa, ary ny soratra sy ny lamina dia mahasarika ny maso sy toy ny endrika kokoa noho ny poketra tsotra, ka nahasarika ny sain'ny mpanjifa ary nampiroborobo ny varotra Vokatra.
Amin'ny fampiratiana dia azonao atao matetika ny mahita ity karazana fonosana ity. Ny anaran'ny orinasa, ny sary famantarana ny orinasa, ny vokatra lehibe na ny filozofian'ny orinasan'ny orinasa dia voatonta eo amin'ny fonosana, izay mampiroborobo tsy hita maso ny endrika orinasa sy ny sarin'ny vokatra, izay mitovy amin'ny fampielezana fampielezana finday, miaraka amina fivezivezena be dia be, tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana ihany. ny fandefasana, nefa koa misy vokany tsara amin'ny dokam-barotra, noho izany dia endrika dokam-barotra malaza ho an'ny mpanamboatra sy ny hetsika ara-toekarena sy ara-barotra. Arakaraka ny tsy manam-paharoa ny famolavolana an'ity karazana fonosana fonosana ity, vao mainka mahomby ny fanaovana dokam-barotra.
2. Kitapo miantsena
Fahita matetika ity karazana fonosana fonosana ity, natao ho an'ny fivarotana lehibe, toeram-pivarotana ary toerana hafa, hanamorana ny mpanjifa hitondra ny entan'ny mpanjifa. Ity karazana kitapo fonosana ity dia vita amin'ny akora plastika amin'ny ankapobeny. Raha ampitahaina amin'ny poketra hafa, ny rafitra sy ny fitaovany dia somary matevina ary afaka mitazona entana betsaka kokoa, ary ambany ny vidiny. Ny poketra fiantsenana sasany dia hanonta ihany koa ny mombamomba ny vokatra na ny orinasa, izay mety hitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana sy ny fanaovana dokambarotra koa.
3. Kitapo fonosana fanomezana
Ny kitapo fonosana fanomezana dia noforonina tsara, toy ny andraikitry ny boaty fivarotana, izay mazàna mampitombo ny sandan'ny fanomezana. Matetika misy karazana fitaovana telo: plastika, taratasy ary lamba, ary ny sakany amin'ny fampiharana dia malalaka ihany koa. Kitapo fonosana fanomezana tsara tarehy dia mety hampihemotra ny fanomezanao. Miaraka amin'ny fomba fiainana tsy miovaova, ny mpanjifa dia manana takiana avo sy avo kokoa amin'ny kitapo fonosana fanomezana, ary ny kitapo fonosana fanomezana toy izany dia lasa malaza kokoa.
Ny kitapo fonosana dia sokajiana araka ny fitaovany
Amin'ny indostrian'ny fanontana, ny fitaovan'ny kitapo fonosana amin'ny ankapobeny dia taratasy mifono, taratasy fotsy, taratasy kraft ary baoritra fotsy. Anisan'ireny, ny taratasy mifono dia malaza kokoa noho ny fotsifotsy sy hamirapiratra, ny fanontana printy ary ny fiantraikany amin'ny dokambarotra aorian'ny fanontana. Matetika, aorian'ny fandrakofana ny tampon'ilay taratasy mifono sarimihetsika maivana na sarimihetsika matte dia tsy vitan'ny hoe misy ny fanoherana ny hamandoana sy ny faharetany, fa toa voadio kokoa ihany koa.
Fotoana fandefasana: Nov-20-2020